admin February 24, 2022	LifeStyle, Other Leaveacomment
၁။ ရှူဆေးကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ တားမွဈထားတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ လူတှကေို လေးလံထိုငျးမှိုငျးစတေယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ Vicks တံဆိပျ ရှူဆေးနဲ့ Sudafed အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှကေို ပွငျးပွငျးထနျထနျ တားမွဈထားပါတယျ။
၂။ Church လှခေါးထဈတှမှော စားသောကျဖို့အတှကျ ပိတျပငျထားတဲ့ အီတလီနိုငျငံ။
သငျ့အနနေဲ့ အီတလီမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တဈခုခုစားသောကျတော့မယျဆိုရငျ အလှနျသတိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ တကယျလို့သာ Church အနီးအနားမှာဖွဈစေ၊ လှခေါးထဈတှမှောပဲဖွဈစေ တဈခုခုစားသောကျမိမယျဆိုရငျ ဥပဒနေဲ့ ငွိစှနျးနိုငျပါတယျ။
၃။ အတှငျးခံအကငြ်္ီ ခြှတျလို့မရတဲ့ ဖီဂြီ။
ဖီဂြီနျိုငျငံဟာ အလှနျသာယာလှပတဲ့ ကြှနျးစုနိုငျငံဖွဈပွီး သှားရောကျလညျပတျသူတှအေတှကျ နလေောငျခံခွငျး၊ ရကေူးခွငျးတို့ကို ပွုလုပျဖို့ အကောငျးဆုံးနိုငျငံတဈနိုငျငံပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အတှငျးခံအကငြ်္ီ၊ အတှငျးခံဘောငျးဘီ မပါဘဲ ရကေူးခွငျး၊ နလေောငျခံခွငျးတှလေုပျနတောကို ဖမျးမိခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ထောငျခခြံရပါလိမျ့မယျ။
၄။ ဆနျဖရနျစဈစကိုမှာ ခိုစာကြှေးတာဟာ ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျခွငျးပဲဖွဈ။
ဆနျဖရနျစဈစကိုရဲ့ လမျးမတှပေျေါမှာ ခိုစာကြှေးခွငျးဟာ တရားမဝငျပါဘူး။ Golden Gate တံတားကွီးနဲ့ ထငျရှားတဲ့ ဆနျဖရနျစဈစကိုမွို့မှာတော့ ခိုတှဟော ရောဂါပျိုးတှကေို သယျဆောငျနိုငျရုံသာမက မွို့ရဲ့ အလှအပကိုလညျး ထိခိုကျပကျြစီးစတေယျဆိုပွီး တားဆီးပိတျပငျထားခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
၅။ လဆေိပျမှာ ဓာတျပုံရိုကျဖို့ တားမွဈထားတဲ့ ကာဇကျစတနျ။
သငျ့အနနေဲ့ ခရီးတဈခုခုမသှားခငျ မိသားစုနဲ့ပဲဖွဈစေ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပဲဖွဈစေ လဆေိပျမှာ စုပွီး ဓာတျပုံရိုကျခငျြပါသလား ? ? ? ကာဇကျစတနျမှာသာဆိုရငျတော့ လဆေိပျမှာဓာတျပုံရိုကျခွငျးဟာ ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျရာရောကျပါတယျ။ လဆေိပျအတှငျးမှာပဲဖွဈစေ၊ လဆေိပျပတျဝနျးကငျြမှာပဲဖွဈစေ ဓာတျပုံရိုကျခွငျး၊ စဈဖကျဆိုငျရာ အဆောကျအအုံတှကေို ဓာတျပုံရိုကျခွငျးဟာ ကာဇကျစတနျမှာတားမွဈထားပါတယျ။
၆။ ဆေးခွောကျသုံးစှဲမှုကို အပွငျးအထနျတားမွဈထားတဲ့ ဂမြကောနိုငျငံ။
ဂမြကောနိုငျငံမှာ ဆေးခွောကျသုံးစှဲခွငျးကို ပိတျပငျထားခွငျးဟာ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှကေို အကွီးအကယျြ အံ့အားသငျ့စပေါတယျ။ ၁၉၁၃ ခုနှဈကတညျးကစတငျပွီး ဂမြကောနိုငျငံမှာ ဆေးခွောကျ စိုကျပြိုးခွငျး၊ သုံးစှဲခွငျးနဲ့ လကျဝယျပိုငျဆိုငျထားခွငျးတှကေို တားမွဈပိတျပငျထားခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
၇။ အရကျစံခြိနျတိုငျးကိရိယာကို ဆောငျထားရနျလိုအပျတဲ့ ပွငျသဈ။
ပွငျသဈမှာတော့ ကားမောငျးတဲ့သူတိုငျး အရကျစံခြိနျးတိုငျးကိရိယာကို သူတို့ရဲ့ ကားထဲမှာ မဖွဈမနဆေောငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ အရကျစံခြိနျတိုငျးကိရိယာမပါဘဲ ဖမျးမိမယျဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ (၁၁) ယူရို ဒဏျငှပေေးဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။
၈။ ခဈြသူရညျးစားနဲ့ ကွညျနူးလို့မရတဲ့ ယူအအေီး။
တကယျလို့သငျ့အနနေဲ့ ဒူဘိုငျးကို ခဈြသူ ရညျးစားနဲ့ အလညျအပတျသှားမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ခဈြသူကို လူမွငျကှငျးနရောမြိုးမှာ နမျးခွငျး၊ ဖကျခွငျး၊ လကျကိုငျခွငျးတို့ကို အထူးသတိထား ရှောငျကွဉျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ အဖမျးခံရမှာဖွဈပါတယျ။
၉။ အခြိနျတိုငျး ဘောငျးဘီဝတျထားဖို့လိုအပျတဲ့ ဂရိ။
ဂရိနိုငျငံသားတှနေဲ့ မသငျ့လြျောတဲ့ အပွုအမူတှကေို မရောထှေးသငျ့ပါဘူး။ တကယျလို့သငျဟာ ဂရိမှာရှိတဲ့ ပငျလယျကမျးခွတှေကေို အလညျအပတျသှားပွီး အပနျးဖွမေယျဆိုရငျတော့ ဘောငျးဘီကို အခြိနျပွညျ့ ဝတျဆငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၁၀။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးကို တငျးကွပျထားတဲ့ စင်ျကာပူ။
စင်ျကာပူမှာ ဆေးလိပျသောကျခွငျးကို မွောကျအမရေိကထကျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ တားမွဈထားပါတယျ။ အမြားပွညျသူနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့နရောတှဖွေဈတဲ့ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ ပနျးခွံတှနေဲ့ လမျးမတှပေျေါမှာ ဆေးလိပျသောကျမိပါက ဒဏျငှအေမွောကျအမွား ပေးဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ထိုနညျးတူ ပီကထှေေးထုတျသူတှကေိုလညျး ပွငျးထနျတဲ့ဒဏျငှတှေေ သတျမှတျထားပါတယျ။
၁။ ရှူဆေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လူတွေကို လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ Vicks တံဆိပ် ရှူဆေးနဲ့ Sudafed အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားပါတယ်။
၂။ Church လှေခါးထစ်တွေမှာ စားသောက်ဖို့အတွက် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ။
သင့်အနေနဲ့ အီတလီမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တစ်ခုခုစားသောက်တော့မယ်ဆိုရင် အလွန်သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ Church အနီးအနားမှာဖြစ်စေ၊ လှေခါးထစ်တွေမှာပဲဖြစ်စေ တစ်ခုခုစားသောက်မိမယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနိုင်ပါတယ်။
၃။ အတွင်းခံအင်္ကျီ ချွတ်လို့မရတဲ့ ဖီဂျီ။
ဖီဂျီနိုင်ငံဟာ အလွန်သာယာလှပတဲ့ ကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး သွားရောက်လည်ပတ်သူတွေအတွက် နေလောင်ခံခြင်း၊ ရေကူးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတွင်းခံအင်္ကျီ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ မပါဘဲ ရေကူးခြင်း၊ နေလောင်ခံခြင်းတွေလုပ်နေတာကို ဖမ်းမိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ထောင်ချခံရပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမှာ ခိုစာကျွေးတာဟာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းပဲဖြစ်။
ဆန်ဖရန်စစ်စကိုရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ခိုစာကျွေးခြင်းဟာ တရားမဝင်ပါဘူး။ Golden Gate တံတားကြီးနဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့မှာတော့ ခိုတွေဟာ ရောဂါပိုးတွေကို သယ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက မြို့ရဲ့ အလှအပကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်ဆိုပြီး တားဆီးပိတ်ပင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ လေဆိပ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့ ကာဇက်စတန်။
သင့်အနေနဲ့ ခရီးတစ်ခုခုမသွားခင် မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်စေ လေဆိပ်မှာ စုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ပါသလား ? ? ? ကာဇက်စတန်မှာသာဆိုရင်တော့ လေဆိပ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။ လေဆိပ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေ၊ လေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်စေ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ ကာဇက်စတန်မှာတားမြစ်ထားပါတယ်။
၆။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကို အပြင်းအထန်တားမြစ်ထားတဲ့ ဂျမေကာနိုင်ငံ။
ဂျမေကာနိုင်ငံမှာ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်စေပါတယ်။ ၁၉၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီး ဂျမေကာနိုင်ငံမှာ ဆေးခြောက် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အရက်စံချိန်တိုင်းကိရိယာကို ဆောင်ထားရန်လိုအပ်တဲ့ ပြင်သစ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ ကားမောင်းတဲ့သူတိုင်း အရက်စံချိန်းတိုင်းကိရိယာကို သူတို့ရဲ့ ကားထဲမှာ မဖြစ်မနေဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အရက်စံချိန်တိုင်းကိရိယာမပါဘဲ ဖမ်းမိမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ (၁၁) ယူရို ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ ကြည်နူးလို့မရတဲ့ ယူအေအီး။
တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ ဒူဘိုင်းကို ချစ်သူ ရည်းစားနဲ့ အလည်အပတ်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကို လူမြင်ကွင်းနေရာမျိုးမှာ နမ်းခြင်း၊ ဖက်ခြင်း၊ လက်ကိုင်ခြင်းတို့ကို အထူးသတိထား ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အဖမ်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အချိန်တိုင်း ဘောင်းဘီဝတ်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ ဂရိ။
ဂရိနိုင်ငံသားတွေနဲ့ မသင့်လျော်တဲ့ အပြုအမူတွေကို မရောထွေးသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဂရိမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကို အလည်အပတ်သွားပြီး အပန်းဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီကို အချိန်ပြည့် ဝတ်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၀။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို တင်းကြပ်ထားတဲ့ စင်္ကာပူ။
စင်္ကာပူမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို မြောက်အမေရိကထက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားပါတယ်။ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ပန်းခြံတွေနဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်မိပါက ဒဏ်ငွေအမြောက်အမြား ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ ပီကေထွေးထုတ်သူတွေကိုလည်း ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ငွေတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Previous အဝလှနျကနေ အလှလှနျဖွဈသှားတာကွောငျ့ မိခငျကပါမမှတျမိတော့တဲ့ အမြိုးသမီး။
Next UFO ကို လယောဉျနဲ့ဝငျတိုကျခဲ့တဲ့ လယောဉျမှူးတဈယောကျရဲ့ အသေးစိတျဖွဈရပျမှတျတမျး။